Howlgalka AMISOM ee Soomaaliya oo looga hadlay shir kadhacay Addis Ababa – Radio Daljir
Diseenbar 2, 2017 8:01 b 0
Waxaa maalinimadii shalay kusoo gabagabooday magaalada Addis ababa ee xarunta dalka Itoobiya kulan gaar oo looga hadlay Howlgalka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika Soomaaliya ee AMISOM.
Kulanka oo ahaa kii 25aad ee guddiga nabadda howlgalka AMISOM, oo ay soo qaban qaabiyeen Midowga Afrika, taliyayaasha ciidamada Burundi, Kenya, Uganda, Djibouti, Ethiopia ayaa diiradda lagu saaray howlgalada xiligaan kasocda Soomaaliya.
Madaxda ayaa isku raacay in la taageero howlgalada ciidamada Soomaaliya ee ka dhanka ah Al-shabaab, sidoo kalena illo dhaqaalle loo raadiyo ciidamada AMISOM, sii wadida tabarada ciidamada Soomaaliya si’ay ammaanka dalka ugala wareegaan AMISOM marka ay baxayaan iyo wada shaqaynta dhanka dagaalka Al-shabaab.
Madaxda ayaa sidoo kalle sheegay wali inay khatar tahay kooxda Al-shabaab, loona baahanyahay in si taxadar kujiro loo sii wado howlgalka iyadoo la iskaashanayo.
Wasiirkii sadexaad oo iska casilay Hirshabelle